Pastor munamato chakakomba haana shamisa | Apg29
Pastor munamato chakakomba haana shamisa
Pepanhau The zuva vakaita zvokunakidzwa mufundisi vanoverenga foni paakanga achinyengetera.
Day uye munzanga Vezvenhau kuparadzira mufundisi wacho Mobile Surfing achiri akatungamirira ungano mumunyengetero. Ndakanyora hapana nezvazvo nekuti ndakafunga mufundisi kuti kuverenga bönämne apo akanyengetera. wechokwadi Very. Day anonyora munyaya itsva:
- Paiva mushumiri shamwari kubva Ohio ane mudzimai ane kenza, anoti Perry Stone.
- I vakanhonga foni yangu Messa iye.
Saka mhinduro yake vose vaya vaifunga kuti mamiriro acho ezvinhu akanga sekesa ndechokuti paiva chinhu sekesa zvachose naro.
- Iwe akasekwa yako mari yangu kuti mufundisi ane mudzimai aiva nekenza.
The mufundisi anotsanangura idzva YouTube mavhidhiyo.
Dzimwe nguva tinofanira kutsvaka på¨varför zvinhu zvichiitika uye kwete kugumisa. It Varege kufanana hunoita.
Zuva pamwe inofanira ruregerero?
Dzimwe nguva chaitika kuti vanhu vakandipoteredza kunge Kupopota chete kuti ndakagara mu cellphone yangu. It chaitika kaviri kuti ndaizotanga kupinda mumotokari. Zvino ini surfed kwete kunyange Mobile kana akatarira mauri. Zvakanga zvakakwana kuti ndaiva mariri uye ipapo akagumisa kuti ndinoda Surf kana kunoirinda.
Zvose zviri nekuti handizivi, asi Ndinofungidzira vane shanje pamusana Blog yangu nzvimbo Apg29. Mukuwedzera nokuramba vaonane nevanhu Ndinoshandisa Mobile wangu parunhare kuti dzifambirane uye basa iri Blog rangu nzvimbo. Mumwe wavo akabva akumbira ruregerero, mumwe kwete.
Zvino iwe unofanira kuva negodo. Munogonawo kutanga Blog uye kuparadzira mbiri vhangeri raJesu Kristu!